Nandita KC talks Glamour, it depends on time – Nepali Movies
Nandita KC talks Glamour, it depends on time
Actress Nandita KC debuted in Nepali movie industry through the movie ‘Indreni’. After that she has done numerous movies and she has established herself as one of the good actresses in the industry.
In addition to movies, Nandita has also worked in television programs like telefilm ‘Karuna’. The interview posted below is in Nepali:
नायिका नन्दिता केसी चलचित्र ‘इन्द्रेणी’बाट नेपाली रजतपटमा पदार्पण भएर चम्केकी हुन् । उनले आजसम्ममा दर्जनौं सफल चलचित्रहरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । तैपनि अहिलेको अवस्थामा नन्दितालाई तटस्थ नायिकाको रुपमा चिनिन्छन् । तर आगामी चलचित्रहरुमा भने नन्दिताले अन्य नायिकाकै अनुशरण गर्दै ग्लामर्सतिर ध्यान दिने भएकी छिन् । उनले भनिन् ‘समय अनुसार चल्नुपर्ने हुनाले पनि ग्ल्यामरलाई अँगाल्नै पर्ने भएको छ ।’ नन्दितासँगको वार्ता संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
आजभोलि के गर्दै हुनहुन्छ?
– म आजभोलि चलचित्र ‘सपना’मा काम गर्दैछु । अनि टेलिचलचित्र ‘करुणा’मा पनि काम गरिरहेकी छु । म डेढ महिना जति मेरो स्किन एलर्जी भएको कारण रेष्टमा बसेकी थिएँ । अरु दुइवटा चलचित्रमा पनि कुरा भइरहेको छ तर साइन चाहिँ भएको छैन ।
तपाईं नायिकाको रुपमा यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ?
– मलाई एकदमै खुसीको अनुभव भइरहेको छ । संर्घष गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो ।
तपाईं एउटी तटस्थ नायिकाको रुपमा चिनिनु भएको छ । यसको कारण के हो?
– यसमा म के भन्छु भने, म आजसम्म ब्यालेन्समा छु । तैपनि मलाई दर्शकले मन पराएका छन् । म आजसम्म खाली बस्न परेको छैन ।
अहिलेको अवस्थालाई हर्दा नायिकाहरुको चर्को प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, यसमा तपाईंको उपस्थिति कस्तो छ?
– अँ, हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा गरेर नै राम्रो प्रतिभा निस्कने हो । तैपनि मचाहिँ आफै नै प्रतिस्पर्थी हुँ । म अझै सिकिरहेकी छु ।
अहिले आएर ग्ल्यामरप्रति बढी नायिकाहरुको ध्यान जान थालेको छ नि?
– ग्ल्यामर त समय अनुसार गर्नुपर्छ । पहिले पहिले गुन्यूसाडीमा पनि ग्ल्यामर देखिन्थ्यो भने अहिले त समाज नै परिवर्तन भएको छ । त्यसैले पनि आजको अवस्थामा ग्ल्यामर जरुरी भइसकेको छ ।
अब तपाईं पनि ग्ल्यामरलाई नै प्राथमिकता दिनुहुन्छ होइन त?
– हो, अहिलेको अवस्थामा ग्ल्यामर आवश्यक छ । तर ग्ल्यामर भन्दैमा जस्तो पायो, त्यस्तै नभएर कथासँग मेल खानुपर्यो । मलाई कस्तो विषय-वस्तुमा ग्ल्यामर सुहाउँछ । त्यसैअनुसार म ग्ल्यामर दिन्छु ।
त्यसो भए आगामी चलचित्रहरुमा तपाईं पनि नया रुपरंगमा आउँदै हुनुहुन्छ होइन त?
– मैले समय अनुसार परिवर्तन गरिसकेकी छु । मैले पाएको भूमिका अनुसार धेरै नै परिवर्तन ल्याइसकेकी छु ।
तपाईंको कामअनुसार कम चर्चा हुनुको कारण के हो?
– त्यो त चर्चा गर्ने व्यक्तिहरुले नै जानुन्, मलाई चाहिँ त्यो आइडिया भएन, तपाईंले कस्तो किसिमको चर्चा भन्नुभएको हो । अब कामको चर्चा भन्ने हो भने पाइरहेकी छु ।
तपाईं विदेशी कार्यक्रममा बढी नै जानुहुन्छ । त्यसमा आकर्षण के छ?
– यो त नेपालमा मात्र नभएर वलिउडतिरका कलाकारहरु पनि विश्व भ्रमणमा जान्छन् । यस्तो प्रक्रिया त हुनुपर्छ । नेपाली दाजुभाइहरु विदेशमा गएर परिश्रम गर्छन् । उनीरुको मनोरञ्जनका लागि पनि हामी जानुर्पर्छ ।
अहिले नायिकाहरुको आयस्रोत कस्तो छ?
– आयस्रोतको हिसाबले भन्ने हो भने ठीकै छ । तैपनि अझसम्म नायिकाहरुले काम गरेजस्तो र दुःख गरेजस्तो पारिश्रमिक भने पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले हामी नायिकाहरु आजसम्म मर्कामा नै छौं । यसमा चलचित्र विकास बोर्डदेखि निर्माण संघले पनि कुरा बुझिदिनुपर्छ ।
आफ्नो पेसाप्रति कत्तिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ?
– म एकदमै सन्तुष्टि छु । सबैभन्दा ठूलो कुरा नाम पाएकी छु । नाम पाउनु नै ठूलो कुरा हो । त्यसैले पनि म सन्तुष्ट छु ।
www ladoputi com
Posted by badmasi at 4:49 pm	Tagged with: Nandita KC
Rekha Shah – An Autobiography and interview